လေဖြတ်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ - Hello Sayarwon
လေဖြတ်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ
ခေါင်းကိုက်ခြင်းဟာ အလွန်အဖြစ်များတဲ့ ဝေဒနာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကျဝေဒနာ၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ အိပ်ရေးပျက်ခြင်း စတဲ့ အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုး၊ ရောဂါအမျိုးမျိုးကြောင့် ခေါင်းကိုက်နိုင်သလို လေဖြတ်ခြင်းကြောင့်လည်း ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ လေဖြတ်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာ ဒီဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဦးနှောက်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်းအချို့ ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်း၊ ဦးနှောက်တွင်း သွေးလှည့်ပတ်မှု ပြောင်းလဲခြင်းတို့ကြောင့် အချို့လူနာတွေဟာ လေဖြတ်ပြီးနောက်မှာ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ ခံစားကြရပါတယ်။ ဦးနှောက်သွေးယိုခြင်းကြောင့် လေဖြတ်တဲ့လူနာတွေမှာ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ ခံစားရနိုင်ချေ ပိုများပါတယ်။
လေဖြတ်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ (၄) မျိုး ရှိပါတယ်။
ဆေးအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည့် ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ – အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး အလွန်အကျွံအသုံးပြုသူတွေမှာ အများဆုံးဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကြွက်သားတင်းအားကြောင့်ဖြစ်သည့် ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ – ဒါကတော့ ကုသရလွယ်ကူတဲ့ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်သည့်ဝေဒနာ – အလွန်ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာဖြစ်ပြီး လူနာကို ပျို့ချင်အန်ချင်ဖြစ်စေသလို ပင်ပန်းနွမ်းနေစေပါတယ်။ ဒီဝေဒနာသက်သာအောင် အာနိသင်ပြင်းတဲ့ဆေးဝါးတွေ အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
အခြားဆေးဝါးများကြောင့်ဖြစ်သည့် ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ – သွေးကျဲဆေး၊ သွေးတိုးကျဆေးများကြောင့်လည်း ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ ခံစားရတတ်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ လေဖြတ်ပြီးနောက်ပိုင်း ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ ခံစားရမယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ မဖြစ်မနေ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာ ရှိမရှိ အမြန်ဆုံးစစ်ဆေးနိုင်ပြီး လိုအပ်တဲ့ကုသမှု ခံယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာဟာ စိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းအရင်းကို ရှာဖွေကုသနိုင်မယ်ဆိုရင် သက်သာပျောက်ကင်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ဆရာဝန်အနေနဲ့ သင့်မှာဖြစ်နေတဲ့ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာအမျိုးအစားကိုလိုက်ပြီး သင့်တော်တဲ့ကုသမှု ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး၊ အရောင်ကျဆေး အသုံးပြုခြင်း
အနားယူခြင်း – အတွေးမများဘဲ အိပ်ရာထဲ သက်သောင့်သက်သာနားနေခြင်းက ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ – ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ အတွေး၊ အပြုအမူများကို ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့် ဒီဝေဒနာကို သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခြင်း – ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခြင်းက ကိုယ်စိတ်အပန်းပြေစေပြီး ခွန်အားပြည့်တင်းစေပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တစ်ဦးရဲ့ အကူအညီနဲ့ သင်နဲ့သင့်တော်မယ့် လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီး ပုံမှန်လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သည့် အစားအသောက်များကို စားသုံးခြင်း – ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သစ်သီးဝလံများ ပိုမိုစားသုံးခြင်းကလည်း ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကုသရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
အရက်သေစာသောက်စားခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း စတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ အပြုအမူများကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း
အကယ်၍ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ ပိုမိုဆိုးရွားလာမယ်၊ ခေါင်းကိုက်တဲ့ပုံစံ ပြောင်းလဲလာမယ်ဆိုရင်တော့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက် သင့်ဆရာဝန်ကို အသိပေးသင့်ပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာဟာ နောက်တစ်ကြိမ် လေဖြတ်မယ့်လက္ခဏာ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာဟာ ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ်ဆို့မှုကြောင့် လေဖြတ်ထားတဲ့လူနာတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ ဒီဝေဒနာဟာ သာမန်လက္ခဏာတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ကုသပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။
Pain and headaches. https://www.stroke.org.uk/what-stroke/common-problems-after-stroke/pain-and-headaches. Accessed May 20, 2017.
Hansen AP, Marcussen NS, Klit H, Andersen G, Finnerup NB, Jensen TS. Pain following stroke:aprospective study. Eur J Pain. 2012 Sep;16(8):1128-36. doi: 10.1002/j.1532-2149.2012.00123.x.
Hansen AP, Marcussen NS, Klit H, Kasch H, Jensen TS, Finnerup NB. Development of persistent headache following stroke:a3-year follow-up. Cephalalgia. 2015 Apr;35(5):399-409. doi: 10.1177/0333102414545894.
6. Pain management after stroke. https://strokefoundation.org.au/-/media/A20E0EE19EC14952A93264A8773D41B5.ashx?la=en. Accessed May 20, 2017.